गज्जबको कुराः मौरीको विषले एचआइभी र क्यान्सरको उपचार हुन सक्ने ! access_timeफागुन ७, २०७५
खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ, यो नेपाली उखान हो । यो उखानले भने जस्तै मौरीको टोकाइको पीडा त्यसले टोकेको मानिसलाई मात्रै थाहा हुन्छ । मौरीले टोकेपछि, अझ भनौं चिलेपछि हामीलाई असह्य पीडा हुन्छ, टोकेको वरिपरि भाग सुन्निएर आउँछ । कैंयन दिनसम्म जीवन अत्यन्तै कष्टकर ...
पाइल्सबाट बच्न यसो गर्नुस् , कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ पाइल्स ? access_timeफागुन ४, २०७५
काठमाडौँ । पाइल्ससम्बन्धी समस्या हुने व्यक्तिहरुको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । हाम्रो शरीरमा लाग्ने धेरै रोगको कारण अस्वस्थ्य खाना र निष्क्रिय जीवनशैली हो । यही कारणमध्ये एक हो पाइल्स पनि । पाइल्स गोप्य अङ्गमा हुने हुँदा धेरै व्यक्तिहरु रोग लागे पनि समयमा चिकित्सकलाई देखाउ...
गुलियो खाँदा किन दाँतमा कीरा लाग्छ ? access_timeफागुन २, २०७५
हाम्रो शरीरको एउटा महत्वपूर्ण अंग दाँत पनि हो । दाँतले हामी खानेकुराहरु चपाउने काम गर्छौं । दाँत नै भएन भने हामीले खानेकुराहरु राम्ररी खान सक्दैनौं । राम्ररी खानेकुरा खान नपाएपछि मानिसको हालत कस्तो होला ? सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । दाँतले खानेकुरा चपाउने काम ...
८० प्रतिशत डाक्टरको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ नबुझ्ने : access_timeफागुन १, २०७५
काठमाडौँ । ठाकुर पोखरेल हाल वीर अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । उनको फार्मेसीमा औषधि लिने आउने बिरामीमध्ये १० देखि १५ जनाको प्रेस्क्रिप्सन नबुझ्ने भेटिन्छ । त्यस्तो स्थिति आउँदा उनी फेरि आफूलाई जाँच गरेको डाक्टरलाई सोधेर आउनु भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउँछन्...
यौनाङ्ग र पाठेघरबिना जन्मिइन् यी युवती, अब उपचारका लागि पैसा जुटाइरहेछिन् access_timeफागुन १, २०७५
यौनाङ्ग र पाठेघरबिना जन्मिएकी एक युवती आफ्नो उपचारका लागि ९ हजार पाँच सय डलर (१० लाख रुपैयाँ) जुटाउने कोसिसमा छिन् । उपचार गरेर उनी आफ्नो परिवार सुरु गर्न चाहन्छिन् । ओन्टोरिया सिम्कोईकी २१ वर्षे सारा गिस्बेचले १६ वर्षसम्म पनि महिनावारी सुरु नहुँदा आफूमा केही समस्...
महिलाहरुको तुलनामा पुरुष किन कम बाँच्छन् ? access_timeमाघ २९, २०७५
पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरु धेरै वर्ष बाँच्छन् । महिलाको औषत उमेर ७४ वर्ष दुई महिना रहेको छ भने पुरुषको औषत उमेर ६९ वर्ष आठ महिना मात्र रहेको छ । सन् २०१० को जनगणना अनुसार अमेरिकामा सय वर्ष भन्दा धेरै उमेर समूहका मानिसको सङ्ख्या ५३ हजार ३ सय ६४ थियो । यो सङ्ख्या...
नेपालमा कण्डमको प्रयोग न्यून, ८ प्रतिशत पुरुषले मात्र प्रयोग गर्ने access_timeमाघ २८, २०७५
काठमाडौँ । यौन सम्पर्कका लागि सुरक्षित मानिने कण्डम नेपालमा न्यून प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एचआइभी तथा यौनरोग सर्नबाट बचाउने, नचाहेको गर्भ नरहने, जन्मान्तर र परिवारको आकार सीमित गर्नका लागि भरपर्दो साधन भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग कम देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्...
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिने २५ चिकित्सक पक्राउ access_timeमाघ २७, २०७५
काठमाडाैं-कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिने २५ जना चिकित्सक पक्राउ परेका छन् । कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको दरबन्दी संघ अन्तर्गत हुनुपर्ने माग राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि धर्नामा रहेका सरकारी चिकत्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष दिपेन्द्...
डिस्लेक्सियाः तोते बोल्ने, राम्रो पढ्न नसक्ने, उल्टोपाल्टो पढ्ने समस्या ! access_timeमाघ २६, २०७५
डिस्लेक्सियाले ग्रस्त विश्वविख्यात हस्तीहरु, जसको सफलताको कथाले प्रमाणित गरेको छ : बुद्धू र मन्दबुद्धि ठानिएकाहरु पनि प्रतिभाशाली हुन्छन् ! के तपार्इं तीन वर्षसम्म बोल्नै नजान्ने र नौ वर्षसम्म पनि खर्रर बोल्न नसक्नेहरुलाई मन्दबुद्धिको मान्नुहुन्छ ? के तपाईं स्कूलमा गणितमा आलु ख...
ह्याम्स हस्पिटलको सिद्धान्त : पहिला उपचार अनि पैसा, बुटिक हस्पिटल बनाउने योजना access_timeमाघ २३, २०७५
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उदाएको दुई दशकपछि ह्याम्स हस्पिटलको व्यवस्थापन पक्ष फेरिएको छ । ख्याति प्राप्त चिकित्सकलाई एकजुट गराएर सुलभ रूपमा उपचार गराउन ह्याम्प हस्पिटलको व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरिएको छ । वरिष्ठ पेट रोग विशेषज्ञ डा. मधु घिमिरेले सञ्चालनमा ल्याएको ह्याम्स हस्पिटललाई...
एक वर्षभित्र क्यान्सरको सटिक उपचार: इजरायलका वैज्ञानिकहरुको दावी access_timeमाघ २१, २०७५
एजेन्सी । इजरायली वैज्ञानिकहरुले आफूहरुले अर्को वर्षसम्म क्यान्सरको उपचार विकास गर्ने दावी गरेका छन् । तर, केही विज्ञहरुले भने इजरायलको यस दाबीमाथि आशंकका व्यक्त गरेका थिए । केही महिनाअघि मात्रै क्यान्सरको एक उपचार विधि इम्युनोथेरापी विकास गरेबापत जेम्स एलिसनले नोबे...
‘एन्सर’ नभएको रोग हो क्यान्सर ? विशेषज्ञहरु भन्छन्ः हैन, निको हुन्छ क्यान्सर पनि ! access_timeमाघ २१, २०७५
एक जमाना थियो, क्यान्सर भन्नेबित्तिकै सबै थर्कमान हुन्थे । कुनै रोगीमा क्यान्सर भएको देखियो भने परिवारमा रुवावासी चल्थ्यो, चिकित्सक स्वयं पनि निराश र हतोत्साही बन्न पुग्थे । किनभने, क्यान्सर भनेको निको नहुने रोग थियो । भनाइ नै चलेको थियो, ‘एन्सर’ नै नभएको रो...
बेलैमा उपचार गरे निको हुन्छ क्यान्सर तर ८० प्रतिशत रोगी ढिलो गरी आउँछन् अस्पताल access_timeमाघ २१, २०७५
आज विश्व क्यान्सर दिवस । क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्नका लागि विश्वभरनै यो दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । नेपालमा पनि क्यान्सर दिवसको अवसरको विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । क्यान्सर दिवस आउनुभन्दा १५ दिन पहिलादेखि नै क्यान्सर विशेषज्ञ चिकित्सकहरु जन...
शरीरमा ट्याटु छ ? यस्तो हुनसक्छ तपाईंको यौन जीवन access_timeमाघ २०, २०७५
आजकाल मानिसहरुबीच ट्याटु बनाउने निकै क्रेज छ । मानिसहरुले आफ्नो शरिरमा विभिन्न कुरा दर्साउने ट्याटु खोपेका हुन्छन् तर एक अनुसन्धानले ट्याटु बनाउने शौख यत्तिकै उत्पन्न नहुने दाबी गरेको छ । अनुुसन्धानका अनुसार जो व्यक्ति ट्याटु बनाउँछन् उनीहरुले अत्यधिक मानसिक तनाव झेलि...
गर्भावस्थासँग जोडिएका पाँच झुट, जसलाई महिलाले वर्षौंदेखि सही मान्दै आएका छन् access_timeमाघ १८, २०७५
एलिजाको विवाह भएको तीन वर्ष भइसकेको थियो । केही समयअघि उनको महिनावारी रोकियो । प्रियंकालाई आफू गर्भवती भएको हो कि भन्ने शंका लाग्यो र परीक्षण गरिन् । नतिजा पोजिटिभ निस्कियो । एलिजाका घरका सदस्यले उनी गर्भवती भएको थाहा भएपछि धेरै कुरा सिकाए । कसैले यो नखाउ भने &n...
स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्सन : सेवा अवरुद्ध पार्ने चिकित्सकको नाम सङ्कलन गर्दै, कारवाहीको तयारी access_timeमाघ १८, २०७५
अस्पतालमा सबैभन्दा बढी सेवा लिने विभाग हो, ओपीडी । तर, नेपाल चिकित्सक संघले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा माग गर्दै आज (शुक्रबार) देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णयगरेपछि यो सेवा लिनबाट धेरै सेवाग्राही बञ्चित बनेका छन् । कत...
नर्सिङ शिक्षाको बेहाल : स्वेदशमा उपेक्षा, विदेशमा ‘डिमान्ड’ access_timeमाघ १४, २०७५
काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । ‘द लेडी विथ द ल्याम्प’बाट विश्वमा परिचित फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई नचिन्ने कमै मानिस होलान् । युद्धबाट छटपटिएका घाइते बिरामी सिपाहीहरूलाई स्याहारसुसार गरेर उनले पुर्याएको अतुलनीय से...
तपाईंको दिसाले बच्न सक्छ कसैको ज्यान, दान गर्ने विचार छ ? access_timeमाघ १४, २०७५
मिशेल रोबर्टस्/ बीबीसी वीर्यदान बारे त तपाईंले सुन्नुभएकै होला तर कहिले दिसा दान गरेको कुरा सुन्नुभएको छ ? सुन्दा अचम्म लाग्ला तर यो वास्तविकता हो । ३१ वर्षे क्लाउडिया क्याम्पेनेला ब्रिटेनको एक युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्ट सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुन् र दिसा दानकर्ता पन...